Iindaba - Inkampani yeWeibo Ibambe iNkomfa Yomsebenzi ka-2021
Inkampani yeWeibo ibambe iNkomfa yoMsebenzi yowama-2021
Ngentsasa ye-1 ka-Matshi, inkampani iququzelele intlanganiso yomsebenzi we-2021 kwigumbi lenkomfa ye-C3. Intlanganiso yayiphethwe ngusekela-mphathi jikelele uLiu Wei, kunye noXue Gangyi, umlawuli kunye nenkokeli ye-Weibo, kunye nomphathi jikelele uLi Dong, uSekela-General Manager uQi Jifei, uNiu Deqing, kunye neGosa eliyiNtloko lezeMali uLiu Runhong baya kwintlanganiso.
UMphathi Jikelele u-Li Dong wanika ingxelo yomsebenzi kwinkomfa enesihloko esithi "Ukuhlanganisa iSiseko, Ukuphucula uMgangatho kunye nokuQinisa iShishini eliPhambili, Ukuzabalazela ukuqalisa uhambo olutsha lwe-Weibo "ye-14 yeminyaka emihlanu" yoPhuhliso "; Umphathi Jikelele u-Li Dong wachaza xa ephonononga umsebenzi wakhe ngo-2020, Ngaphantsi kobunkokeli obuqinileyo bekomiti yeqela lenkampani yeqela kunye nenkampani ezenzekelayo, inkampani ibambelela kubunkokeli beqela kwaye isebenzise ngokuqinisekileyo izigqibo ezinkulu kunye nokuthunyelwa kweKomiti yePhathi. . Ukufezekisa uphuhliso oluphezulu lwenkampani njengesikhokelo, kugxininise kwizalathisi zezoqoqosho zonyaka kunye nemisebenzi ebalulekileyo, ngokuzola nangokunamandla ukuphendula ubunzima kunye nemingeni, ukulungelelanisa uphuhliso lweshishini lenkampani kunye nokuthintela kunye nolawulo lwesithsaba esitsha se-pneumonia, kwaye wenze umsebenzi oqinileyo wokuthengisa, uphando kunye nophuhliso, imveliso kunye nolawulo Iziphumo eziphawulekayo ziye zaphunyezwa ekufezekiseni uphuculo oluzinzileyo kumgangatho wezoshishino kunye nokuthintela ubhubhane kunye nokulawula ubhubhane, kunye neenjongo eziphambili kunye nemisebenzi yenqanaba "lokudibanisa" liphunyezwe ngempumelelo, kwaye umsantsa “wophuhliso olukumgangatho ophezulu” uye wacuthwa ngakumbi.
UMphathi Jikelele u-Li Dong wenze isindululo ekujoliswe kuko ngo-2021. Ikwabeke kwacaca ukuba u-2021 sisikhumbuzo seminyaka eli-100 sokusekwa kweQela lamaKomanisi eTshayina kunye nokuqala kwe “Isicwangciso seminyaka emihlanu ye-14”. Inkampani iya kuzalisekisa ngokupheleleyo iKomiti ePhakathi yeQela, iinkampani zeqela, iinkampani ezizenzekelayo, kunye nabanini-zabelo beenkampani phantsi kwesikhokelo sexesha elitsha le-Xi Jinping le-socialism eneempawu zaseTshayina. Ukwenziwa kwezigqibo kunye nokuthunyelwa kwentlanganiso kunye nebhodi yabalawuli, ukuthobela "uphuhliso oluphezulu", ukuphumeza ingcamango yomsebenzi "yokuphucula", ukuqinisa uhlaziyo, ukuqinisa ukuveliswa kwezinto ezintsha, kunye nesiseko sophuhliso "lwemveliso", ukuphucula isikali. yoshishino olukhoyo kunye nokwandisa isikhokelo seemveliso ezintsha njengendawo yokuqala. Ukwandisa ishishini eliphambili leenzwa zokuhlukaniswa kwamandla, faka intsimi entsha yenzwa, kwaye ukhawuleze ukulungiswa kwecandelo lokulinganisa kunye nokulawula.
Uwama-2021 ngunyaka wokuqala wotshintsho kunye nophuculo lwenkampani. Ngunyaka wokuqala “weSicwangciso seMinyaka emiHlanu ye-14”. Umsebenzi wethu sele usephepheni. I-Weibo lishishini lethu eliqhelekileyo kunye nekhaya lethu. Kufuneka sibe neminqweno efanayo. Sebenza nzima kunye. "Izinto ezinzima emhlabeni kufuneka zenziwe ngokulula, kwaye izinto ezinkulu emhlabeni kufuneka zenziwe ngokweenkcukacha." Kufuneka sisabele ngenkuthalo ikhwelo lenkampani “lokutshintsha nokuphucula ukusebenza kakuhle”, singene emdlalweni ngokuzolileyo, kwaye ngenkalipho sithwale uxanduva olunzima. Yiba ngumntu ongcono, ube yi-Weibo engcono!
I-Voltage yangoku yoVavanyo, Ukusetyenziswa kwamandla aphantsi kwe-Dc yangoku yoVavanyo, Hall Effect inzwa yangoku, I-Hall Effect Ac inzwa yangoku, Ukuchaneka okuphezulu kweSensor yangoku ye-Ac, IHolo Yoluvo lwangoku,